101.16_Ifulethi Elibukekayo & Elimangalisayo neliyisitayela elinethala elinokubukwa kolwandle. - I-Airbnb
101.16_Ifulethi Elibukekayo & Elimangalisayo neliyisitayela elinethala elinokubukwa kolwandle.
Cadaqués, Girona, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Serveis Immobiliaris
Ifulethi elibukekayo elinokubukeka okuhle okutholakala emgwaqweni i-Verge de Montserrat, imizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha kanye ne-Llane noma amabhishi e-Port Alguer.
Okusanda kulungiswa, kuyingxenye yesitezi sesibili sesakhiwo esakhiwe umklami odumile wase-Catalan u-Oscar Tusquets. < br/> Leli fulethi elihle lesimanje nelisebenzayo, elinomhlobiso wesimanje, lakha indawo enethezekile nomoya omuhle kakhulu ozokwenza uchithe isikhathi sokuhlala esikhethekile kakhulu. < br/> Leli fulethi linakho konke
Ifulethi elibukekayo elinokubukeka okuhle okutholakala emgwaqweni we-Verge de Montserrat, imizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha kanye ne-Llane noma amabhishi e-Port Alguer.
Okusanda kulungiswa, kuyingxenye yesitezi sesibili sesakhiwo esakhiwe ngumklami odumile wase-Catalan u-Oscar Tusquets. < br/> Leli fulethi elihle lesimanje nelisebenzayo, elinokuhlobisa kwesimanje, lakha indawo ethokomele nesimo esihle kakhulu esizokwenza uchithe isikhathi sokuhlala esikhethekile kakhulu. < br/> Leli fulethi linakho konke okudingayo ngamaholide akho, negumbi lokuphumula (i-TV, usofa - umbhede 1,40m x 1,90m) - igumbi lokudlela - ikhishi elinakho konke okudingekayo (i-microwave, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokomisa izitsha, i-Nespresso coffee maker, iketela, i-toaster, i-squeezer, i-blender/mixer), ikamelo lokulala elilodwa elinombhede olala abantu ababili (1,50m x 2,00m) elinokufinyelela ku-patio, igumbi lokugezela elineshawa (umshini wokomisa izinwele) kanye nethala elihle futhi elincane elinokubukeka okuhle kolwandle nesonto le-Cadaqués. I-air conditioner kanye nokushisisa.
< br/> AMASHIDI NAMATHAWULA AFAKIWE. < br/> I-WIFI Ngo-2 - 4 personas. < br/> Indawo ewusizo yaphansi: 34liday < br/> Indawo ewusizo: 5liday < br/> Indawo ewusizo: 5liday < br/> Indawo ewusizo: 10
Ibungazwe ngu-Serveis Immobiliaris
Inombolo yepholisi: HUTG-036544